नोट र भोटमा अल्झिएका नेता - Dang Nepal
Home›विचार/विश्‍लेषण›नोट र भोटमा अल्झिएका नेता
नोट र भोटमा अल्झिएका नेता
यतिबेला सभासद्को तलब वृद्धिका कारण धेरै चर्चाको विषय बनेको छ । सामाजिक सञ्जाल लगायत अन्य सञ्चारमा पनि विरोधका स्वरहरु छताछुल्ल भइरहेका छन् । हुन पनि किन नहोस् । ६०१ जना सभासद्को तलब वृद्धि गराउनका लागि कुनै अवरोध नैं भएन संसदहरुले तुरुन्तै पास गरिहाले । तर देशका लागि, जनताका लागि भनेर चुनेर गएका ती सभासद्ले आप्mनै लागि एक्कासी संसदबाट गढ्ढ्ढ ताली पिटी पारित गराउँदा आम जनतालाई लाग्न थाल्यो की उनीहरु देश बनाउन गएका होइन्न । उनी त देश लुट्नका लागि गएका रहेछन् ।
यति बेला देशमा स्थायी शान्तिको लागि कुनै पहल गरिएको छैन, सत्ता कसरी हुत्याउन र आप्mना आसेपासेलाई मोटाउन पाइन्छ भन्नेमै समय खर्चेका हुन्छन् । के का नाममा जनतालाई भुलाउने भन्ने सोचमा भुल्छन् की जस्तो देखिन्छ उनीहरुका व्यवहारलाई नियाल्दा ।
यता सिमाङ्कनका लागि देशमा ठूलो रडाको मच्चिरहेको छ । त्यो अझै पनि मिल्न सकिरहेको छैन । देशलाई संक्रमणकालमा लम्व्याइरहेका छन् । यता एमालेले कुनै हालतमा सिमाङ्कनका हेरफेर नगर्ने अडान लिएको छ । उसले पनि सत्ता बाहिर बसेको फाइदा लिइरहेको छ । उसले यहि कुराबाट जनताको मन जित्न सकिन्छ की भन्ने दाउमा रहेको बुझिन्छ तर उसले संसदमा सभासद्को तलब वृद्धि गर्ने विषयमा कुनै पहन नैं गरेन् । किन उ पनि यसमा सहभागी भई गढ्ढ तालीमा नैं रमायो । साँच्चिकै उ जनताको पिर मर्का राम्रो सँग बुभ्mथ्यो भने त्यस विषमा कडा आन्दोलन गर्नु प¥थ्यो अनि मात्र जनताको पक्षमा देखिन्थ्यो ।
गाउँ गाउँवाट चुनिएका नेता तथा सभाषद्हरुले के आप्mनो दुनो मात्रै ताक्ने हो त ? जनताका पिर मर्का कहिले वुभ्mने हुन । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र अनि गणतन्त्र, आखिर जनताले के पाए ? जनताले पाए त मंहगी, अझ भन्ने हो भने अधिकांस किसानको वेहाल छ । किसानका लागि पनि कुनै सम्बोधन गर्न सकेको छैन, । जनता मात्र चुनावका बेला भोटमा गनिन्छन् त्यस पछि नेताहरु नोटमा साटिन्नछन् । केही हो त राजनीति ? अव जनताहरु राजनिति भने पछि एक खालको वितृष्णा जागृत भएको छ ।
यता केही हप्ता अगाडि कांग्रेस नेतृ सुजता कोइरालाले स्तन क्यान्सरका नाममा १ करोड मागेकीमा ५० लाख पाइन् यस विषयमा पनि जनता बिचमा धेरै विरोधका आवजहरु आए तर ती व्यर्थ रहे । कुनै दलले सुनेन अनि सत्ता बाहिर बसेकाले पनि कुनै कुरा नै उठाएनन् । यस विषयमा पनि सबैदल तथा नेता मौन नै रहे । केही नेताले अलिकति बोले पनि त्यसको कुनै अर्थनै रहेन् । त्यो देखाउने दाँत जस्तै भयो ।
किन यी दुई विषयमा राजनीतिक दलहरुले पहल गरेरन् ?
प्रायः धेरै जसो सभासद् तथा नेताहरु कमाउनका लागि नैं धेरै धनरासी खर्चेर सभासद् भएका छन् । नेता बनेका छन् । उनीहरुलाई कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान हुन्छ । त्यही कमाउनका लागि अनेकन हर्कत पनि गर्न पछि पर्देनन् । यहाँ जनताको मत त्यो बेला माग्छन् जुन बेला चुनावी मिति तोकिन्छ, चुनावी चहलपहल हुन्छ । अनि तातिन्छन् राजनीतिक दलहरु, मत माग्नमै व्यस्त रहने ती नेताहरुलाई हामीले पनि गुटउपगुट गरेर लिप्त हुन्छौं । तर उत्यो बेला हामीहरु त्यही चुनावलाई मध्य नजर गर्दे पार्टी फरक लाइन भएका आफन्त नातेदार सबैलाई भुल्छौ अनि सपना पनि बुन्न थाल्छौं । म लागेको नेता पछि जित्यो पनि म यो काममा फिट हुन्छु यो सेवा पाउछु, या मेरा मान्छेहरुलाई केही न केही रोजगारी दिलाइदिन्छु आदि आदि सपना बुन्न थाल्छ । त्यो व्यक्तिगत सपनाले पछि सिंगो समाजलाई असर गर्दछ । उसले समाजका लागि सपना बुनेको भए पछि पनि त्यही समाजले फाइदा लिने हो तर अधिकांसले यस विषयमा कुनै गम्भिर भएको देखिएको छैन् ।
यही १ महिनाको सेरोफेरोमा राजनीतिक घटना क्रम हेर्ने हो भने राजनीतिक फाइदा छ भने सभासद् तथा मन्त्रीहरुलाई छ । उनीहरुले आप्mना हितमा हुनेखालका निर्णयहरु छन् भने तुरुन्तै निर्णय गरिहाल्छन् त्यो सत्ता भित्र होस् चाहे सत्ता बाहिर । हामी सुन्छौ नेपालका केही भू–भाग यस्ता पनि छन् जहाँ सिटामोल पाउन सकिरहेका छैनन् सिटामोलका अभावमा जीवन जिउनमा कठिन भैसकेको छ तर सम्पन्नशाली जो सत्ताको वरिपरि वा मन्त्री समेत भइसकेकी सुजता कोइरालालाई ५० लाख दिइयो त्यो त त्यो भन्दा अगाडी अन्य दलका नेताहरुले पनि विभिन्न रोगका कारण देशको ढुकुटीबाट पैसा पाइसकेका छन्। यस प्रकारको प्रक्रिया त पहिलेदेखि भइरहेकोले पछि पनि कसैलाई दिनु पर्नेहुन्छ भन्दै त्यो ५० लाखको बाटो खोलिदिएका हुन् । आप्mनै हात जगन्नाथ भने जस्तै भएको छ । पछिको बाटोलाई यथावत राख्नका लागि त्यो बाटो त खोलेनै तर पछिल्लो सभासद्को तलब वृद्धिले पनि आप्mनै हात जगन्नाथ गरेका छन् । जनता जति बोले पनि केही नहुने भएकाले यहाँ देशमा केही प्रगती होला जस्तो देखिन्न ।
भरखरै मात्र छिमेकी देश भारतले रु.५ सय र एक हजारका भारु नोट नचलाउने निर्णय गरे लगत्तै नेपालबाट खास्सै पहलकदमी हुन सकेन । भारतसँग सिमाना जोडिएका होउन वा पहाडी समुदाय हुन जसले पनि भारतीय पैसाको व्यवहारिक कारोवार गर्दै आइरहेका थिए । अझ भन्ने हो भने भारतमा औषधी उपचार गर्न जाने प्राय जसोले भारतीय नोटहरु संकलन गरेर राखेका थिए, नेपाललाई करोडौ भारतीय पैसा हुदाँ पनि यसमा पहल नगरिदिँदा अन्नत नेपालीलाई नैं नोक्सानी ्रव्यहोर्न परेको निष्कर्ष निकालिएको छ । तर सरकारका पक्षबाट कुनै चासो देखाइएको छैन् ।
गाउँ गाउँबाट चुनिएका नेता तथा सभासद्हरुले के आप्mनो दुनो मात्रै ताक्ने हो त ? जनताका पिर मर्का कहिले बुभ्mने हुन । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र अनि गणतन्त्र, आखिर जनताले के पाए ? जनताले पाए त मंहगी, अझ भन्ने हो भने अधिकांस किसानको बेहाल छ । किसानका लागि पनि कुनै सम्बोधन गर्न सकेको छैन, । जनता मात्र चुनावका बेला भोटमा गनिन्छन् त्यस पछि नेताहरु नोटमा साटिन्नछन् । केहि हो त राजनीति ? अब जनता हरु राजनीति भने पछि एक खालको वितृष्णा जागृत भएकोछ । नेताहरुको कार्यशैली प्रति साच्चिकै जनताहरु आजित छन् । काममा भन्दा बढी कुरामै देश चलाइरहेकाले अब नेता तथा राजनीतिदलले गंभिर हुनुपर्ने भएको छ । आप्mनो भन्दा पनि समाजका लागि गर्नु पर्ने भएको छ ।सानालाई ऐन र ठुलाालाई चैन भने जस्तै भएको छ ।
के राज्यको सुविधा जो धनाढ्य छन् तीहरुलाई मात्रै हो । के राजनीति गरेको राज्यबाट ब्रह्मलुट गर्नका लागि हो । होइन भने यहाँ सुजाताहरुलाई होइन जो गरिबको रेखामा छन् र उपचारका ेलागि छट्पटाइरहेका छन् तिनीहरुलाई उपचार खर्च देऊ ।
कुशे औँशीका धार्मिक साँस्कृतिक पक्ष
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी र कर्मयोग
नजिकियो तिहार चहलपहल बढ्दै, संस्कृति लोप हुँदै
भारत दशै मान्न घर फर्किदै नेपालीहरु
पहिलो म्यूजिक भिडियोले चर्चा कमाइ हिरो बने बस्नेत